Nhau - [Matipi Ekuchengetedza Mafuta] Iko kunwiwa kwemafuta kweyekuchera kwakasiyana kwazvo, musiyano uripo pakati pevatyairi vatsva nevakuru wakakura kudai?
Zvikamu Warehouse & katarogu
[Mazano Okuchengetedza Mafuta] Mafuta anoshandiswa pakuchera akasiyana zvakanyanya, mukaha uripo pakati pevatyairi vatsva nevakuru wakakura kudai?
Musiyano uripo pakati pekutanga uye mutyairi wekare hauzi tekinoroji chete, asi zvakare mune zvezuva nezuva ...
Pakushanda nemamiriro akasiyana ekushanda, vatyairi vekare vanogona kudzora zviri nyore neruzivo rwavo rwehupfumi kuti vaone kufambiswa kwakanaka kwebasa, uye ivo vari nani kupfuura vatyairi vevacheche maererano nekuchengetedza mafuta uye kusagadzikana.
Saka, ndeupi musiyano uripo pakati pemutyairi mutsva uye mutyairi wekare anoshanda cheya?
Deredza excavator kufashukira
Mukushanda chaiko, tichaona kuti nekuti vharuvhu yekuchengetedza iri mune hydraulic redunhu yakavhurika, kana kufashukira kukaitika, kunyangwe iwe ukawedzera kubhowa, simba remucherechedzi harizowanda panguva yekushanda chaiko, uye tenzi haachazogoni tsika pairi. , Ukaramba uchitsika, mamwe mafuta anozotambiswa.
Sarudza nzvimbo yakakodzera yebasa
Vanoziva vekare vatyairi vanosarudza chinzvimbo chakakodzera pavanopinda munzvimbo, kusiyana nevano pinda vanopinda munzvimbo vasina kusarudza. Ivo vachasarudza kureba kwakafanana neicho chemotokari yakatakurwa kudzikisa kukwirira kwechicherwa panguva yekushanda, kupfupisa chinhambwe chekushandisa, uye nenzira yechisiko kudzivisa marara emafuta.
Ehe, pane zvakawanda zvidiki diki nezve kuchengetedza mafuta. Chero bedzi iwe uchisimbisa kudzidza kwako kwezuva nezuva uye kupfupisa ako matipi ekuchengetedza mafuta pabasa, ndinotenda iwe uchakurumidza kuve mutyairi-unoponesa uye usina kunetseka mutyairi wekare!
Post nguva: Sep-01-2020
Xuzhou Guta, Jiangsu Dunhu, China.